Ciidamo ka tirsan maamulka Puntland oo la wareegay xarunta madaxtooyada Garowe – SHABAKADA HIIRAAN XOG
[ 20/03/2019 ] Ciidamada Amniga oo gacanta ku soo dhigay Horjeege ka tirsan Al-Shabaab	Arimaha Bulshada
[ 19/03/2019 ] Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya oo La Kulmay Safiirrada Midowga Yurub Ee Soomaaliya	Arimaha Bulshada
[ 19/03/2019 ] AKHRISO:- Madaxweynaha maamulka Puntland oo magacaabay wasaarad cusub	Arimaha Bulshada
[ 19/03/2019 ] DAAWO SAWIRO:- Shir muhiim ah oo ka dhacay magaalada Jowhar	Arimaha Bulshada
[ 19/03/2019 ] AKHRISO:- Wasaaradda Arrimaha Gudaha Soomaaliya oo baaq Nabadeed ka soo saartay Dagaallo ka dhacay deegaano ka kala tirsan Sh/dhexe iyo Galgaduud	Arimaha Bulshada
HomeArimaha BulshadaCiidamo ka tirsan maamulka Puntland oo la wareegay xarunta madaxtooyada Garowe
Ciidamo ka tirsan maamulka Puntland oo la wareegay xarunta madaxtooyada Garowe
20/10/2018 B M Arimaha Bulshada, Wararka, Wararka Soomaalia 0
Hiiraan Xog, Ciidamo ka tirsan maamulka Puntland oo ka careysan mushaar la aan ayaa la wareegay madaxtooyada maamulka Puntland ee magaalada Garowe.
Waxay Ciidanku celinayaan gaadiidka iyo dadkii halkaasi mari lahaa tani waxaana ay saameysay shaqooyinkii ka socday Xafiisyada loo maro wadooyinkaasi.
Taliyaha Ciidanka xasilinta gobolka Nugaal Muxyadiin Axmed Muuse iyo Saraakiil kale ayaa waddo dadaallo Ciidanka looga wareejinaayo wadada,maadaama Maanta lagu waddo in ay gaaraan Magaalada Garowe Madax ka socota maamul goboleedyadda.
Ciidankaan ayaa Warbaahinta u sheegay in Muddo 7 bilood ah aysan wax mushaar ah qaadan,islamarkaana ay tahay in ay tilaabo qaadaan.
Ciidamada Ammaanka maamulka Puntland ayaa ku caan baxay Sanadyadii lasoo dhaafay markii ay mushaarka waayaan bilooyin in ay xoog kula wareegaan xarumaha maamulka.
Burcad badeed Soomaali ah oo weerartay Markab marayay xeebaha Soomaaliya
Saudi Arabia admits the death of Jamal